Ndị na-eri nri n'ụlọ ọrụ, ndị na - ebunye ya - Ndị na-emepụta nri China
The eriri feeder nwere mfe Ọdịdị na mụ ọrụ, karịsịa nnukwu nri olu na-mfọn ọrụ. Anyị isi oru itunanya bụ njiko breaker ngwaọrụ, nke nwere ike n'ụzọ dị irè inyeaka nrụgide na biini ọnụ ma gbochie shed ihe onwunwe ke biini ọnụ.
Ugboro abụọ uka vibrating feeder adopts ụkpụrụ nke okpukpu abụọ uka nso resonance inertial vibration. A na-enye ike ịkwa osisi ahụ site na roba, na isi vibration shear roba spring bụ egwu maka afọ iri.
A na-eji usoro ntanetị eletriki electromagnetic eme njem iji gbochie ngọngọ, granular na ntụ ntụ site na nchekwa nchekwa ma ọ bụ olulu na ngwaọrụ nnata ọnụ, otu na mgbe niile.